मुलुकभर थप २७६८ जनामा कोरोना संक्रमण, कहाँ कति ? Canada Nepal
मुलुकभर थप २७६८ जनामा कोरोना संक्रमण, कहाँ कति ?
क्यानाडा नेपाल आषाढ ४ २०७८
काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ७६८ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ । शुक्रबार अपरान्ह स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा गरिएको कूल १३ हजार ३७ परीक्षणमा २ हजार ७६८ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो ।
७ हजार ५६९ जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा १ हजार ९६३ र ५ हजार ४६८ जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा ८०५मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार २० जना कोरोना संक्रमणमुक्त हुँदा सोही अवधिमा ४४ जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा सबैभन्दा बढी संक्रमितको संख्या काठमाडौंमा रहेको छ । काठमाडौंमा काठमाडौंमा ३९४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा बागलुङमा २६२, कास्कीमा १२२, झापामा १२१, मोरङमा ११८, नुवाकोटमा ७४, सुनसरीमा ६७, लमजुङमा ६१, ललितपुरमा ६०, भक्तपुरमा ५४, मकवानपुर र पर्वतमा ४८/४८ जना, काभ्रेपलाञ्चोकमा ४३, बर्दियामा ४०, सर्लाही, धादिङमा ३०/३० जना, दाङमा २९, जुम्लामा २३, स्याङजामा २२, रौतहटमा १९, धनुषामा १७, सिन्धुलीमा १६, नवलपरासी पूर्वमा १४, सिरहमा १३, सप्तरीमा १२, खोटाङ, महोत्तरी, बाँके र रूपन्देहीमा १०/१० जनामा, धनकुटा र तनहुँमा ९/९ जना, अछाम र कैलालीमा ८/८ जना, दैलेखमा ७, बारा, कपिलवस्तु, डडेलधुरामा ६ जना, भोजपुर, पर्सा, म्याग्दी, मुगु र डोटीमा ५, इलाम, उदयपुर, नवलपरासी पश्चिम र कञ्चनपुरमा ४/४ जना, संखुवासभा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, पाल्पामा ३/३ जना, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, रामेछाप, प्युठान र सल्यानमा २/२ जना, ओखलढुंगा, पाँचथर, दोलखा, रसुवा, जाजरकोट र बैतडीमा १/१ जना कोरोना संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आषाढ ४, २०७८ शुक्रवार १८:२४:११ बजे : प्रकाशित
के नेपालमा कोभिशील्ड खोप किनबेच गर्न पाइन्छ ?
काठमाण्डू उपत्यकाका केही ठाउँमा पैसा तिरेर कोभिड खोप पाइने गरेको र त्यस्ता खोप लगाउन हुने वा नहुने भन्दै आफूलाई फोन आउने गरेको एक चिकित्सकले बताएका छन्।
"फलानोले त खोप लगाइसक्यो, हामीले लगाउँदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर एक-दुई महिनायता नियमितजसो मानिसहरूले फोन गरेर सोध्ने गरेका छन्," नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती चिकित्सकले शुक्रवार बीबीसी नेपालीसँग भने।
"राज्यले निःशुल्क लगाइरहेको खोप पैसा तिरेर किन लगाउनुहुन्छ? भनेर हामीले त्यसरी सोध्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरेका छौँ," उनले थपे।
काठमाण्डूकै अर्का एक व्यक्तिले कसैले आफ्नो घरमै आएर कोभिशील्ड लगाइदिने प्रस्ताव गरेको बताए।
कोभिशील्डको पहिलो मात्रा लिएका तर सरकारले दोस्रो मात्रा समयमै उपलब्ध गराउन नसक्दा लामो समय पालो कुर्न बाध्य पाको उमेरका मानिसहरूलाई त्यस्तो प्रस्ताव आउने गरेको र स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएका तथा क्रयशक्ति राम्रै भएका मानिसहरूले त्यसरी खोप लिने गरेको बुझिएको छ।
बीबीसीको सम्पर्कमा आएका केही मानिसले आफ्ना आफन्तलाई त्यसरी खोप लगाइएको स्वीकार गरेका छन्।
"भारतबाट खोप ल्याएर त्यसरी बेच्ने गरिएको रहेछ। पैसा तिरे घरमै आएर लगाइदिन्छौँ भनेर एक जनाले भनेका छन्," अर्का एक व्यक्तिले पनि आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने।
तर सरकारले निजी क्षेत्रलाई त्यसरी खोप ल्याउने अनुमति दिएको छैन।
त्यसरी पाइने कोभिशिल्ड खोप प्रतिमात्राका लागि साढे तीन हजारदेखि आठ हजार रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने उनीहरूले बीबीसीलाई बताए। सरकारसँग बाँकी रहेको कोभिशील्डको मात्रा सरकारी भण्डारबाट चोरी भएर पनि कालोबजारियाको हातसम्म पुगेको कतिपयको आशङ्का छ।
भारतमा राज्यअनुसार सरकारकै अनुमतिमा १,००० हजारदेखि १,५०० भारतीय रुपैयाँमा कोभिशील्डको प्रतिमात्रा विक्री भइरहेको बीबीसी हिन्दी सेवाकी किन्जल पाण्डेयले बताइन्।
अक्सफर्ड-आस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको र भारतमा उत्पादन भइरहेको कोभिशील्डको पहिलो मात्रा लगाएका साढे १३ लाखभन्दा बढी नेपाली दोस्रो मात्राको व्यग्र प्रतीक्षामा छन्।
भारतले गत एप्रिलदेखि निर्यातमा रोक लगाएपछि र कोभ्याक्स अभियानमार्फत् समेत कोभिशील्ड उपलब्ध नभएपछि नेपाल सरकारले त्यसको दोस्रो मात्रा दिन सकिरहेको छैन।
जापान सरकारले अनुदानमा दिने घोषणा गरेको आस्ट्राजेनेकाको १६ लाख मात्रा खोप अगस्ट महिनासम्म आएपछि दोस्रो मात्रा कुरिरहेका मानिसलाई दिने योजना रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँदै आएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालय के भन्छ?
कालोबजारीमा कोभिड खोप विक्री भइरहेको विषयमा अहिलेसम्म कुनै उजुरी नपरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि त्यस्तो सम्भावनालाई नकार्न नसकिने मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारी बताउँछन्।
"त्यस्ता गतिविधि नहोला र नगर्लान् भन्न सकिँदैन। त्यसबारे बुझ्न, बुझाउन र स्थानीय प्रशासनहरूलाई पनि सजग रहन एवं निगरानी बढाउन हामीले भनेका छौँ," बीबीसीसँग उनले भने।
नेपाल सरकारले पैसा तिरेर खोप लगाउन दिने कुनै निर्णय अथवा पैसा लिएर लगाइदिन हालसम्म कसैलाई स्वीकृति नदिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
"कोभिड खोपका नाममा हामीमा अरू चिज पनि प्रयोग हुन सक्छ। गुणस्तरीय खोप नहुन सक्छ वा सरकारले निःशुल्क दिने भनिएको खोपका लागि कसैले ठगी गर्न सक्छ," सहप्रवक्ता अधिकारीले सचेत गराउँदै भने।
"यदि कहीँ कसैले शुल्क लिएर खोप लगाइदिन्छु भनेका छन् भने आत्तिएर लगाउनतिर नजाऔँ। त्यसरी लगाइदिने काममा कोही प्रेरित भएका छन्, कोही त्यसरी गइरहेका छन् भने कानुनको दायरामा ल्याउनेगरी हामीले अनुगमन गरिरहेका छौँ।"
कालोबजारीबारे प्रहरीले के गर्दैछ?
एक भारतीय भैंसी व्यापारीबाट किनेर अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कका सात जनाले खोप लगाएको विवरण शुक्रवार सञ्चारमाध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको छ।
त्यो घटनाबारे अनुसन्धान थालिएको बताउँदै नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले भने, "यो हिसाबले [खोपको कालोबजारी] अलिअलि हो कि जस्तो लाग्यो।"
"त्यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी गर्न हामीले हाम्रा संयन्त्रलाई परिचालन गरेका छौँ। हामीले भिजिलन्स एकदम कडा गरेका छौँ।"सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूलाई आधार बनाएर आफूहरूले निगरानी सुरु गरिएको प्रहरीको भनाइ छ।
भारतसँगका सीमावर्ती नेपाली जिल्लाका कतिपय मानिसहरू त्यता गएर पैसा तिरी कोभिशील्ड लगाउने गरेका विवरणबीच पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पिताम्बर घिमिरेले त्यसबारे कुनै जानकारी नभएको बीबीसीलाई बताए।
"व्यक्तिगत रूपमा त्यसरी गएर खोप लगाएका हुन पनि सक्छन्। तर हामीकहाँ औपचारिक नै जानकारी आएको छैन।"समाचार बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो ।
श्रावण १६, २०७८ शनिवार १२:१९:४५ बजे : प्रकाशित
नेपालमा एकैदिन ३१ सय ६ जनामा कोरोना संक्रमण, २३ जनाले ज्यान गुमाए
काठमाडौँ। सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर थप ३१ सय ६ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ ।
शनिवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार १३ हजार ५ सय १९ वटा परीक्षण गर्दा ३१ सय ६ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । यससँगै कूल संक्रमितको संख्या ६ लाख ९५ हजार ३ सय ८९ (पीसीआर टेस्टबाट) र (एण्टीजेनबाट) ६१ हजार ३ सय ५० पुगेको छ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा १९ सय १६ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या ६ लाख ५४ हजार १ सय ७७ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । निको हुने दर ९४.१ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएका र त्यसअघि भएका गरी थप २३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ९ हजार ८ सय ५७ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रावण १६, २०७८ शनिवार १६:५७:३० बजे : प्रकाशित
काठमाडौं उपत्यकामा एकैदिन ७ सय ७५ जनामा कोरोना संक्रमण, कहाँका कति ?
काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेको छ । शनिबार काठमाडौं उपत्यकामा थप ७ सय ७५ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा थप कोरोना संक्रमित हुनेमा काठमाडौंका ५ सय १७ जना, ललितपुरका १ सय ६४ जना र भक्तपुरका ९४ जना रहेका छन् ।
यस्तै मुलुकभर पछिल्लो २४ घण्टामा ३१ सय ६ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कूल संक्रमितको संख्या ६ लाख ९५ हजार ३ सय ८९ (पीसीआर टेस्टबाट) र (एण्टीजेनबाट) ६१ हजार ३ सय ५० पुगेको छ।
श्रावण १६, २०७८ शनिवार १७:०६:०९ बजे : प्रकाशित
गाउँमा पूजाको प्रसाद खाँदा २८ जना बिरामी
काठमाडौं - मेलम्ची नगरपालिका–११ चालिसेगाउँ चापाबोटमा पूजाको प्रसाद खाँदा २८ जना बिरामी भएका छन् ।
गत साउन १४ गतेको पूजामा सहभागीमध्ये २८ जनालाई एउटै प्रकारको झाडापखाला लागेको मेलम्ची नगरपालिकाका उपप्रमुख भगवती नेपालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सबैलाई स्वास्थ्यचौकीमा ल्याउन सम्भव नभएकाले बिहान स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोली लगेर उपचार गरेर फर्केको जानकारी दिनुभयो । बिरामीमध्ये तीन जनालाई स्वास्थ्य केन्द्र मेलम्चीमा ल्याइएको छ ।
अन्य बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको पनि नेपालले जानकारी दिनुभयो । ‘फुडपोइजन’का कारण झाडापखाला लागेकाले ४८ घण्टासम्म सबै जना ठिक भइसक्ने स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ ।रासस
श्रावण १६, २०७८ शनिवार २०:५५:२२ बजे : प्रकाशित
बालगृहका २० बालबालिकामा कोरोना सङ्क्रमण
मकवानपुर - मकवानपुरस्थित भीमफेदी बालगृहका २२ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । भीमफेदी गाउँपालिका–६ स्थित नेपाल बाल सङ्गठनअन्तर्गतका सो बालगृहमा एकै दिन २२ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो ।
तीमध्ये बालगृहका दुई कर्मचारी र २० बालबालिका रहेको भीमफेदी गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ । एन्टिजेन परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएका उनीहरुलाई छुट्टै स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको बताइएको छ ।
बिहीबार मात्रै बालगृह नजिक रहेको भीमफेदी कारागारका ३५५ कैदीबन्दीलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो ।रासस
श्रावण १७, २०७८ आइतवार ०८:१५:५९ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा थप २ हजार ५६८ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार अपरान्ह दिएको जानकारीअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा गरिएको कूल १२ ६३६ परीक्षणमा २ हजार ५६८ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
८ हजार ४०२ पीसीआर परीक्षण गर्दा १ हजार ९८१ र ४ हजार २३४ एन्टिजेन परीक्षण गर्दा ५८७ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयकाअनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा ५९४ जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ । यसपछि क्रमशः झापामा २०७, कास्कीमा २०४, मोरङमा १९२ र ललितपुरमा १६६, भक्तपुरमा ९१, सुनसरीमा ८९, रुपन्देहीमा ५२, नुवाकोटमा ३९, चितवनमा २७ तथा जुम्ला र सुर्खेतमा २४÷२४, सिन्धुलीमा २३, गोरखामा १९, धादिङमा १५ र तनहुँमा १० जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार २० जना कोरोना संक्रमणमुक्त हुँदा सोही अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट १८ जनाको मृत्यु भएको छ ।
श्रावण १७, २०७८ आइतवार १७:०३:१९ बजे : प्रकाशित